अंकल , तपाईले कुटेर मेरो हात भाँचेको बिर्सनु भयो ? मलाई "sorry भतिज" कहिले भन्ने ? - VOICE OF NEPAL
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०१:३७
1705 ??? ???????
– युरेक पाण्डेय।
मेरो नाम युरेक पाण्डेय हो। म अहिले ६ बर्षको भए।
म तपाईहरुलाई आज एउटा घटना याद गराउछु। कुरा मात्र २ बर्ष अगाडिको हो , १३ अगस्त २०१७ को। त्यो दिन मेरो स्कुलको बिदा थियो, अनि मेरो बाबाको काममा पनि बिदा। मेरो बाबालाई साईकल एकदम मनपर्छ। बाबाले साईकल चलाएको देखेर मलाई पनि साइकल चढ्ने रहर लाग्यो। मैले बाबालाई भने , ” बाबा, आज मेरो लागि साईकल किन्न जाउ न ? ”
बाबाले हुन्छ भन्नुभयो। बाबा र म साईकल किन्न कोलम्बो गयौ। मेट्रोबाट निस्केर कोलोम्बो मार्केटभित्र पुगेका मात्रै थियौ , २ जनाको समुहमा आएकामा एक जनाले मेरो बाबा र म माथि हातपात गर्न शुरु गरे। मेरो बाबाले उनलाई साथमा बालक भएकोले यसो नगर्न अनुरोध गर्नुभयो। तर उनले सुन्दै सुनेनन्, मेरो बाबा र मलाई तछाडमछाड गरे। मेरो बाबाले आफुलाई चोट खाएर पनि मलाई बचाउने प्रयास गर्नुभयो। तरपनि मलाई चोट लाग्यो, मेरो बाबालाई पनि। त्यत्तिकैमा ति दुवै जना भागे।
त्यतिखेर म सानो थिए , म धेरै कुरा बुझ्दैनथे, मेरो तोतेबोली थियो। त्यही घटनाले गर्दा मेरो हातमा चोट लाग्यो। हामी अस्पतालमा गयौ, एक्सरे भयो, हात भाचिएको रहेछ। डाक्टरले हातमा प्लास्टर लगाईदिए। मैले महिनादिनसम्म दुख पाउनुपर्यो। साइकल पनि किन्न पाईन।
आज ६ बर्षको भैसके। अचेल म आफै कम्प्युटर चलाउछु, मेरो फेसबुक छ , टिकटक भिडियो बनाउछु, खेल्छु र स्कुल जान्छु। म अहिले १ कक्षामा पुगे। अहिले मैले साइकल पनि किनेको छु, साइकल चलाउछु।
मैले अचेल थाहा पाए कि तपाई त्यतिबेला पनि NRNA भन्ने नेपाली संस्थाको नेता हुनुहुदो रहेछ। तपाईकै संस्थामा हामीले निबेदन दिदा पनि कसैले सुनेन, उल्टै तपाईलाई राजिनामा दिएको नाटक गरेर बचाएको भन्ने सुनेको छु।
सुन्दैछु, तिनै मलाई पिटेर मेरो हात भाँचीदिने मान्छे अब नेपालीहरुलाई सहयोग गर्छु भन्दै त्यही NRNA भन्ने संस्थाको आजको चुनाबमा महासचिव पदमा उम्मेदवार दिएका छन् रे। अंकल मेरो के दोष थियो ? म माथि हातपात गरेर मेरो हात भाचिदिनुभएको थियो !
अंकल म कसरि बिश्वास गरु, तपाईले नेपालीहरुलाई सेवा गर्नुहुन्छ ? कसरि बिश्वास गरु कि तपाई म जस्तै साना साना नेपाली बाबुनानीहरुलाई माया गर्नुहुन्छ ? म कसरी बिश्वास गरु कि म जस्तै र मेरै उमेरका अरु साना साना नानीहरु तपाईबाट सुरक्षित छन् ?
मेरा हात भाचिएका बेलाका फोटाहरु हेरेर म अझै झस्किन्छु अनि सधै मेरो बाबालाई सोध्छु, ” बाबा , अंकलले मलाई किन पिट्नु भएको ? अंकलले मेरो हात किन भाचिदिनुभएको ? मेरो के गल्ति थियो बाबा ? ” तर, मेरो बाबाले अझैसम्म मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छैन।
अंकल, अब म कसरि बिश्वास गरु कि तपाई नेपालीहरुको हितका लागि काम गर्नुहुन्छ ? तपाईबाट हामी कसरी सुरक्षित छौ ? तपाईले मलाई “sorry भतिज गल्ति भयो ” भन्नुभएको भए मैले यो घटना बिर्सिसकेको हुन्थे र तपाईलाई माफ गरिसकेको हुन्थे, तर तपाईले कहिल्यै ४ बर्षे यो भतिजको पिडा बुझ्नुभयो ?
हेमराज अंकल , तपाईले कुटेर मेरो हात भाँचेको बिर्सनु भयो ? मलाई भेटेर “sorry भतिज ” कहिले भन्ने ?